कलियुगका कुरा: July 2013
कहिले मान्छे बन भन्ने होला?
अस्तिमात्र 'माओवादी चिल हो' भनेका प्रचण्डले हिजो फेरि अर्का ड्यास माओवादीलाई कुखुरा चोर्ने 'स्याल' भन्दै आफ्ना कार्यकर्तालाई 'सिंह बनेर स्याल धपाओ' भनेछन्। के के मात्र हुनुपर्ने हो माउवादी कार्यकर्तालाई नि कहिले चिल, कहिले स्याल, कहिले सिंह ? यस्तै तालले 'चरा जनावर बन' भन्दै जाँदा एक दिन त मान्छे पनि बन्नु भन्लान् नि कार्यकर्तालाई प्रचण्डले।
चुनाव भइहाले कसलाई देखाएर भोट माग्ने होला यिनले ?
यसो सोच्छु, माओवादीले विगतमा प्रचण्ड/बाबुराम देखाएर चुनाव लडे र राम्रो मत ल्याए। काँग्रेसले उहिले बिपी/किसुनजी/गणेशमान देखाएर चुनाव लडे र कहिले दुई तिहाई त कहिले बहुमत ल्याए। कहिले मदन भण्डारी र कहिले मनमोहन देखाएर एमालेले चुनाव लड्यो र गतिलो मत ल्यायो। पहिले उपेन्द्र यादव देखाएर मधेशीले मत ल्याए। यस पटक अब यिनले कसलाई देखाएर मत माग्ने होलान् ? कोही बचाएर राखेका छन् कि। जनताले प्रचण्ड/बाबुराम हेरेर माओवादीलाई भोट देलान्? सुशील कोइराला/शेरबहादुर देउवा हेरेर काँग्रेसलाई भोट देलान्? झलनाथ खनाल/माधव नेपाल हेरेर एमालेलाई भोट देलान्? चुनावमा मत (जनता) आकर्षित गर्न विचार, दर्शन, योजना मात्र भएर पुग्दैन। जनताले विश्वास गर्ने नेतृत्व पनि दिन सक्नुपर्छ।
चार दलको फुर्ती
Saroj Kshetri ले भनेकोमा अलिकति थप्न मन लाग्यो: सरकार रेग्मीले चलाइदिनपर्ने, बैद्यलाई चीनले मनाइदिनपर्ने, यादवलाई भारतले फकाइदिनपर्ने तैपनि चुनावको भर नहुँदै चारदलले बैठकबसी संविधानसभाको दोस्रो चुनाव भएको एक बर्षभित्रै सबिधान लेख्ने फुर्ती लाउने ?
पत्रकारलाई 30% डिस्काउन्ट
उद्योग वाणिज्य संघ, चितवनको गेस्ट हाउसमा ५ दिन बसेको बिल तिर्दा, 'तपाईलाई महासंघका मान्छेले राखिदिनुभएको 20% कर्पोरेट डिस्काउन्ट छ' भन्दै थिए। पैसा झिक्ने बेलामा परिचय पत्र देखेपछि थपे, 'ए पत्रकार पो हो । पत्रकारलाई त झन् 30% डिस्काउन्ट हो नि।' पत्रकारको कार्डले यस्तोसम्म पनि गर्छ भन्ने चाहिँ थाहा थिएन, यस अगाडि।
नेपाल ग्यास्ट्रिक पार्टी खोल्ने कि
अनेक नाम र थरका डेढ सय भन्दा धेरै पार्टी अर्को संविधानसभा चुनावका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइसकेका छन्। आयोगले ड्यास माओवादीलाई दर्ता गर्नका लागि फेरि दल दर्ता गर्ने समय देला जस्तो छ। सबै जसो देशी विदेशी वाद, ठाउँ, जातजाति, धर्मका नाममा दल दर्ता भइसक्या रहेछन् तर रोगका नाममा दल दर्ता भएको रहनेछ बरु नेपाल ग्यास्ट्रिक पार्टी खोल्यो भने समानुपातिकमा एक दुई सिट आइहाल्ला कि?